Ososayensi base-Afrika baqala eyabo i-preprint server - AfricArXiv
Ososayensi base-Afrika bethula iseva yabo yokuqala
Kushicilelwe ngu Segbedji on I-XNUMiyi-Juni 25 I-XNUMiyi-Juni 25
Ukukhishwa kwamahhala, okuku-inthanethi kungenye yenombolo ekhulayo lapho izifundiswa ezwenikazi lonke zingabelana ngomsebenzi wazo
[Okushicilelwe ekuqaleni ku Index Yezendalo]
Iqembu labameli besayensi elivulekile babe wethula isithunzi sokuqala sangempela esenzelwe kuphela ososayensi base-Afrika. I-AfricArxiv Ifuna ukuthuthukisa ukubonakala kwesayensi yase-Afrika ngokusiza izifundiswa ukuthi zihlanganyele umsebenzi wazo masinyane, kusho abasunguli be-Justin Ahinon, onjiniyela wewebhu futhi ongumfundi kwizibalo ezifakiwe eNational School of Statistics, Planning and Demography eParakou, Benin, West Africa, noJo havemann, oqeqesha ezokuxhumana kwezesayensi, iFinyelela 2 Perspectives, eBerlin, eJalimane.
Banethemba lokuthi iseva yokuqala izokhulisa ukusebenzisana phakathi kwabaphenyi, futhi yenze ulwazi lufinyeleleke kalula kubenzi bezinqubomgomo, osomabhizinisi, abasebenzi bezokwelapha, abalimi, izintatheli, phakathi kwabanye ababambe iqhaza.
Ipulatifomu izosingathwa ku-Open Science Framework (OSF), isoftware yemithombo yamahhala evumela abacwaningi ukuthi baxhumane futhi babelane ngomsebenzi wabo. Izothuthukisa imibhalo yokuqala, ukubhala ngeposi, ikhodi nedatha, futhi yemukele ukuthunyelwa okuvela kuzo zonke izilimi zase-Afrika, kufaka phakathi isi-Akan, isiTwi, isiSwahili nesiXhosa.
I-AfricArxiv ingemuva nje lamapulatifomu amaningi okushicilela avulwa okwethulwe kusukela ekuqaleni konyaka we-2018. NgoMashi, i-African Institute for Mathematicsical Science, kanye no-Elsevier bamemezele ukuthi bazokwakha iphephabhuku elinomyalezo ovulekile Isayensi yase-Afrika, kwathi ngo-Ephreli, kwethulwa i-African Academy of Science (AAS) ne-F1000 Ukucwaninga Okuvulekile kwe-AAS, eshicilela imibhalo yesandla enenqubo evulekile yokubuyekezwa kontanga. Ucwaningo lwe-AAS Open lushicilele izindatshana eziyi-17 selokhu zahamba bukhoma, ezinye eziyisishiyagalombili zibuyekezwa.
Umqondo we-KiaArxiv wakhiqizwa ngama-tweets yizithangami ezingqungqutheleni zesayensi ezivulekile eKumasi, eGhana ngo-Ephreli 2018. Ngemuva kwezinyanga ezintathu kuphela kamuva, i-KiaArxiv inepulatifomu, ikhasi le-Facebook, i-akhawunti ye-Twitter, neqembu lososayensi abayi-12, abazinikele isikhathi sabo sokuphakamisa insizakalo, futhi babheke ukuthi okuqukethwe okuhanjisiwe kufanelekile yini.
Ijubane lokulethwa libangelwa kalula ukuthi i-Center for Open Science yenze ngokwezifiso ipulatifomu yayo ye-OSF. I-AfricArxiv ingenye yezinsizakalo ezingama-21 zomphakathi ezakhelwe kwi-OSF, kufaka phakathi i-Arabixiv, esisabalalisa ulwazi ngesi-Arabhu, ne-INA-Rxiv kososayensi base-Indonesia.
Lezi zinto ziphakathi kokugcina umlando kwazo okusebenza kahle kakhulu, kusho uRusty Speidel, umqondisi wezokukhangisa weCOS. Kusukela kwethulwa ngo-Agasti 2017, sekuqongelelwe abangu-2,920.
Ukuze uqhathanise, i-arcyiv yomlando eyakhiwe kahle ye-physics ithola okuthunyelwe okungu-10,000 ngenyanga, bese kuthi i-bioRxiv ifinyelele ekuhanjisweni okungu-1,000 2013 ngenyanga, eminye iminyaka emine ngemuva kokudalwa kwayo ngo-XNUMX.
Impumelelo ye-KiaArxiv izoncika kosayizi nokuzimisela komphakathi ukwabelana ngomsebenzi wabo kanye nomhlaba, kusho u-Speidel.
Eminye imiphakathi ibizwakalise ukukhathazeka kokuqala ngomsebenzi wabo ukuthi ihlaselwe, kepha sebekholwe ngezinzuzo zokuthola impendulo kushesha kontanga yabo, usho kanjena, ikakhulukazi njengoba amaphephabhuku amaningi eseqalile ukukhuthaza abacwaningi ukuthi babelane ngemibhalo yabo ebhalwe phansi. Imishini iphinde inikezwe i-DOI esemthethweni, ethi yona inciphisa ubungozi bokuthi omunye umuntu athathe izikweletu ngomsebenzi wakhe.
“Ingxenye elula ukukhulisa ipulatifomu. Ingxenye enzima siyayikhulisa, siyayisekela futhi ngiyiyisa phambili, ”kusho u-Speidel.
UTolu Odumosu, isayensi yezobuchwepheshe kanye nomcwaningi womphakathi e-University of Virginia, uthi ukufinyelela kuyiphuzu elibuhlungu phakathi kwabaphenyi bakulesi sifunda. Ngenkathi izinto ezisetshenziswayo zingabhekana nenkinga ethile, ezinye izithiyo nazo zidinga ukunakwa, njengamanani wokubhalisela okunqande kwamaphephabhuku asunguliwe nezimali zokushicilelwa. Izikhungo nazo zidinga ukubeka imali eningi, izinto zokwakha kanye nendawo yokucwaninga, kusho u-Odumosu. Ubezothanda ukufaka isandla emsebenzini wakhe e -AfriArxiv uma azi ukuthi kuzofinyelela umphakathi osebenzayo wososayensi e-Afrika, kusho yena.
Okunye ukukhathazeka ngenye yokuqashelwa. "Abantu basaqinile ezweni elinomthelela," kusho uNelson Torto, umphathi wamakhemikhali wokuhlaziya kanye nomqondisi omkhulu we-AAS. "Kuzothatha isikhashana ukuthi abantu basuke emaphephabhukwini okuthiwa anethonya elikhulu baye epulatifini lapho bezokwazi khona ukuhlanganyela nabasebenza nabo ngokushesha okukhulu." Kodwa-ke, endabeni yokushicilela, laba bobabili akudingeki ukuthi bahlangane. okukhethekile.
Kwabacwaningi abaningi esifundeni, kuba ngcono okuthe xaxa ezitolo. Kepha abanye bakhathazeka ngokuthi ososayensi bangahle badidanise okubhalwe kuqala kumaphephabhuku abukezwe ontanga. “Kuhlala kunemininingwane yokwabelana ngolwazi,” kusho uTorto. "Kepha abantu badinga ukwazi ukuthi loluphi uhlobo lolo lwazi, nokuthi bangalusebenzisa kanjani."
U-Ahinon noHasmm banethemba lokuthi izincazelo nemihlahlandlela ecacile izokhipha noma imiphi imibono engalungile.
Ukulungiswa ngomhlaka 26 Juni 2018: UNelson Torto okwamanje akahlangene ne-University of Botswana.
Categories:	Vula Ukufinyelela
Tags: vula isayensiisimangaloukushicilela
I-ASAPbio ibambisene ne-DORA, HHMI, kanye neChan Zuckerberg Initiative ukusingatha ingxoxo ngokwakha isiko lokubuyekezwa komphakathi okwakhayo kanye nempendulo kuma-preprints. Funda isimemezelo esigcwele se-ASAPbio bese uthola ukuthi ungabhalisela kanjani umcimbi futhi usekele ukubuyekezwa kwangaphambili.